Warcraft III on Ubuntu - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Warcraft III on Ubuntu
Warcraft III (The Frozen Throne) ကို ကစားကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဒီ forum ထဲမှာပါမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အရူးအမူးစွဲလန်းလွန်းလို့ပါ။ ကျွန်တော်က Ubuntu ကို အသုံးပြဖို့ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။ Live boot နဲ့တော့ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Warcraft III ကို Wine HQ သုံးပြီးကစားပေမယ့် ဘာမှဝင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ.။ Google ကနေရှာကြည့်တဲ့အခါ အညွှန်းလေးတွေတွေ့ပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာမှမပြင်တတ်ပါဘူး။ ပြင်စရာ source code တွေလည်းပေးထားပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် Ubuntu မှာ Zawgyi Unicode တောင် ကျွန်တော် မသွင်းတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ.... အဲဒါကြောင့်မို့ Warcraft III ကို ကစားလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (ကျွန်တော်က ငပိန်းပါ.. ကလေးသင်သလိုသင်မှတတ်မြောက်လွယ်တာကြောင့်နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်.... စကားပြောရိုင်းရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....ကျွန်တော် Ubuntu ကိုအတည်တကျသုံးတော့မှာဖြစ်လို့ မသိနားလည်သမျှ ဖြေကြားပေးကြပါရန်လည်း တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်... လေးစားရသော အကိုအမတို့ခင်ဗျာ.......)
Find More Posts by လင်းကို
ပြန်စာ - Warcraft III on Ubuntu
World Craft နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Ubuntu Wiki page ရှိပါတယ်။
ပလူးစ်, မျိုးဟန်ထက်, azp09
Originally Posted by လင်းကို
Warcraft III (The Frozen Throne) ကို ကစားကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဒီ forum ထဲမှာပါမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အရူးအမူးစွဲလန်းလွန်းလို့ပါ။ ကျွန်တော်က Ubuntu ကို အသုံးပြဖို့ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။ Live boot နဲ့တော့ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Warcraft III ကို Wine HQ သုံးပြီးကစားပေမယ့် ဘာမှဝင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ.။ Google ကနေရှာကြည့်တဲ့အခါ အညွှန်းလေးတွေတွေ့ပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာမှမပြင်တတ်ပါဘူး။ ပြင်စရာ source code တွေလည်းပေးထားပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် Ubuntu မှာ Zawgyi Unicode တောင် ကျွန်တော် မသွင်းတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ.... အဲဒါကြောင့်မို့ Warcraft III ကို ကစားလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (ကျွန်တော်က ငပိန်းပါ.. ကလေးသင်သလိုသင်မှတတ်မြောက်လွယ်တာကြောင့်နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်.... စကားပြောရိုင်းရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....ကျွန်တော် Ubuntu ကိုအတည်တကျသုံးတော့မှာဖြစ်လို့ မသိနားလည်သမျှ ဖြေကြားပေးကြပါရန်လည်း တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်... လေးစားရသော အကိုအမတို့ခင်ဗျာ.......)
Warcraft III / Dota လို ဆော့ချင်ရင် သူလိုမျိုး ဂိမ်းပဲ..ဆော့ကြည့်ပါကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်
sBelow are the minimum and recommended system specifications to run Heroes of Newerth.
We strongly advise players to use components closer to the recommended system requirements. While the game will function with these minimum requirements it will have significantly poorer performance than the recommended requirements
ဖလန်းဖလန်းထလို့ DOTA All Star ကိုမေ့သွားမယ်
Last edited by kyawminkhoung; 21-10-2012 at 09:44 AM..